अमेरिकाकाे मुटु थर्काउने हाेचि मिन्ह काे हुन् ?
आज १९ मे, होचि मिन्हको जन्म दिन। उनीबाट हामीले के सिक्ने ? सन् १९४५ सेप्टेम्बर २ मा कमसल खाकीको पाइन्ट, कमिज र टायरको चप्पल लगाएर हो चि मिन्हले मुलुक उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए। उनको जन्म सन् १८९० मे १९ भएको हो। सन् १९०५ मा स्कुल भर्ना भई फ्रान्सेली भाषाको अध्ययन गर्न थाले तर आर्थिक अभावले उनले औपचारिक पढाइ अघि बढाउन सकेनन्।
बाध्यता शिक्षक भएर आय आर्जन गर्न थालेसँगै विद्यार्थीहरूलाई देशभक्ति, राष्ट्रियता, भाषा, देश, मित्र र सत्रुबारे ज्ञान दिएर आन्दोलनको बीउ रोपे। हो चिले नाम फेरे, ‘बा’ नयाँ नाम राखे र भान्छाको काम गर्न थले। त्यहाँ उनले बिहान ४ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म काम गर्नुपर्थ्यो।
१९१७ मा उनी बेलायत पुगे। बिहान बेलुका काम गर्ने र दिउँसो अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न थाले। बेलायतपछि उनी फ्रान्स गए। फ्रान्समा बस्ने भियतनामी बीचमा देशभक्त सङ्गठन बनाए। फ्रान्सेली समाजवादी पार्टीको सदस्य बनेर मार्क्सवादीहरूको सम्पर्कमा पुगे। १९२३ मा फ्रान्सबाट सोभियत सङ्घ गए र अन्तर्राष्ट्रिय किसान महाधिवेशनमा भाग लिए। उक्त महाधिवेशनबाट उनी कार्यकारी समितिको सदस्यमा चुनिए।
१९२४ मा सोभियत सङ्घ (मस्को) मा सम्पन्न कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको पाँचौँ महाधिवेशनमा भाग लिए साथै अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्घ, युवक सङ्घ र महिला सङ्घको अधिवेशनमा उनले फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिए।
मस्कोबाट हो चि मिन्ह चीन गए र पत्रिका बेच्ने हकरको काम थाले। त्यसबाट आएको पैसाले एक छाक खाएर बाँकी पैसाले चीनको शासन पद्धतिबारे अध्ययन गर्न थाले। चीनमा रहेका भियतनामीहरूलाई ‘क्रान्तिकारी भियतनामी युवा सङ्घ’ मा सङ्गठित गरे। साथै चीनको कवाङ्ग गाउँमा गोप्य विद्यालय खोले र भियतनामी युवाहरूलाई क्रान्तिकारी शिक्षा दिन थाले ।
३चीनमा कोमिन्ताङ शासकले पक्राउ गर्न खोजेपछि उनी त्यहाँबाट थाइल्याण्ड गए, त्यहाँको भियतनामी गाउँमा आफ्नै भाषाको विद्यालय खोले र त्यहाँ उनले ‘भियतनामी सहयोग समिति’ नामको सङ्गठन बनाए। १९२९ सम्ममा भियतनाममा तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएका थिए। तिनको बीचमा तीव्र विवाद थियो तर तीनवटै पार्टीहरू कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको सदस्य बन्ने कोसिसमा थिए। ठीक त्यहीबेला हो चिलाई कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको काम गर्न हङकङ पठाइयो।
१९३० मा तीनवटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर उनले शक्तिशाली भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरे।हङकङबाट उनी सिङ्गापुर पुगेलगत्तै पक्राउ परे र पुनः उनलाई हङकङ फिर्ता पठाइयो। १९३३ मा उनी साङ्घाइबाट मस्को पुगे। त्यहाँ उनले लेनिन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न थाले। त्यो विश्वविद्यालयमा विश्वभरिबाट छानिएर आएका नेताहरूले दर्शनशास्त्र पढ्ने गर्थे। १९३५ मा भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम सम्मेलन चीनको मकाउमा सम्पन्न भयो।
१९४० मा दक्षिण भियतनाममा विद्रोह सुरु भयो। भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाइमा प्रथम गुरिल्ला इकाइ गठन भयो। त्यसले १९४१ मा आफ्नो नाम ‘भियतनाम राष्ट्रिय मुक्ति दल’ राख्यो। त्यतिबेला हो चि मिन्ह भियतनाम आइसकेका थिए। आन्दोलन चर्कन थाल्यो र उनले त्यसको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरे। आफ्ना सहायक कमान्डरद्वय भो नगुयान र फाम भान् डोङसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले दक्षिणी चीन पुगेको बेला उनी पक्राउ परे र फ्रान्सको लागि जासुसी गरेको आरोप लगाइयो। जेलमा यातना, कष्ट र भोकको कारण नराम्रोसँग थलिए।
हो चि भियतनाम फर्किए र जनसेनाको कमान्ड समाले। विद्रोह आगोसरी फैलियो। १९४५ मा सत्ता लिने तहमा जापानी र फ्रान्सेली उपनिवेशवाद विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण सुरु भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले हारेपछि विद्रोह विजय नजिक पुग्यो। १९४५ मा उत्तरी भियतनाममा गणतन्त्र स्थापना भयो र हो चि मिन्हको नेतृत्वमा अस्थायी सरकार निर्माण गरियो। मेरो १९४५ अगस्ट १९ मा हनोइ (राजधानी) माथि निर्णायक हमला गरेपछि विद्रोह पूर्ण विजयी बन्यो। २ सेप्टेम्बरमा कमसल खाकीको पाइन्ट, कमिज र टायरको चप्पल लगाएर हो चि मिन्हले मुलुक उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे। उनी भियतनामको राष्ट्रपति बने। १९५१ मा होचि मिन्ह भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भए।
१९५४ मार्च १३ देखि २७ सम्म चलेको भीषण युद्धपछि जेनेभामा वार्ता भएर प्यारलल १७ रेखा बन्यो र फ्रान्सेली सेना त्यहाँबाट फर्कियो। यसरी उत्तरी भियतनाममा कम्युनिस्ट सरकार र दक्षिणी भियतनाममा गैरकम्युनिस्ट सरकार चल्न थाल्यो। १९६९ सेप्टेम्बर २ मा हनोइ, भियतनामा उनको मृत्यु भयो। झण्डै २१ वर्षसम्म अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडेर १९७५ अप्रिल ३० मा भियतनामी मुक्ति सेनाले दक्षिणी भियतनामको राजधानी सैगनमाथि विजय प्राप्त गरे र त्यहाँ गणतन्त्र घोषणा भयो। दुई भियतनामको एकीकरणपछि उत्तर भियतनामका प्रथम राष्ट्रपतिको नाममा दक्षिण भियतनामको राजधानी सैगनको नाम फेरेर ‘हो चि मिन्ह’ सिटी राखियो, जसलाई दक्षिण भियतनामका जनताले गर्वकासाथ स्वीकारे। फ्रान्सेली, जापानी र अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध अनवरत ३० वर्षसम्म लडेर विजयी बनेको सिङ्गो भियतनाम आज हामीले पढिरहेका छौँ।
‘लालसलाम’ र ‘जयनेपाल’ शब्द कसरी प्रयोगमा आए ?